C-star 2020 & Huayuemei Laydhka
C-star - Bandhigga Caalamiga ee Ganacsiga ee Shanghai ee Xalka iyo Isbeddellada Dhammaan wixii ku saabsanaa Tafaariiqda, xubin ka tirsan qoyska carwooyinka EuroShop Trade, ayaa si dhakhso leh u koray tan iyo markii ugu horreysay ee 2015 waxayna noqotay barxad weyn oo saameyn ku leh warshadaha tafaariiqda ee Shiinaha oo dhan. C-star 2020 wuxuu ahaa succ ...
Soosaarida Waxsoosaarka Cusub- RGB Dynamic Curtain LED Strip & RGB Dynamic LED Panel
Waxaan riixnaa laba nooc oo shey cusub ah - Dynamic Curtain RGB LED Strip & Dynamic RGB LED Module. Dhisme kastaa wuxuu sheegaa sheeko, sidoo kale gudahana waa inuu sheegaa. Fududeynta qaab-dhismeedka nalka fudud ee firfircoon ee ka socda HYM Lighting ayaa kaa caawin kara qaabeynta sheekadaas. Naqshadeynta naqshadeynta ...
Kani waa Laydhka Couleur wuxuu ka qayb qaatay EuroShop, daabacaadda 2020 ee qaybta tafaariiqda dhacdadii ugu muhiimsaneyd waxay fursad u siisay Couleur Lighting inay muujiso horumarkiisa iyo hal-abuurkiisa. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelino qof walba oo soo booqday qolkeena ku yaal Euroshop ee ku yaal Düsseldo ...